Mampiasa fandrahonana i Beijing mba hanivanana ny fitantarana ivelan’i Shina ny “Vono olona tany Tiananmen” · Global Voices teny Malagasy
Mampiasa fandrahonana i Beijing mba hanivanana ny fitantarana ivelan'i Shina ny “Vono olona tany Tiananmen”
Voadika ny 04 Jolay 2019 8:50 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Ελληνικά, English
ty lahatsoratra manaraka ity dia nosoratan'i Kris Cheng tany am-boalohany ary navoakan'ny Hong Kong Free Press tamin'ny 2 Jona 2019. Navoaka tato amin'ny Global Voices ny endrika nasiam-panitsiana noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Na dia efa lasa aza ny 30 taona nisian'ny Vono olona tao Tiananmen, dia nanjary lohahevitra saro-pady hatrany ho an'ireo mpanao gazety monina ao Shina ny fitantarana ny famoretana mihoso-drà.
Louisa Lim, mpanao gazety menavazana any Shina izay efa lasa manam-pahaizana, nanadihady ireo mpitati-baovao ankehitriny sy taloha miisa 60 monina any Shina ary nahita fa ny telo ampaha-efatr'ireo izay nitantara ny tsingerintaona no niharan'ny fanorisorenana sy fampitahorana. Nilaza tamin'ny Hong Kong Free Press (HKFP) tao anaty tafatafa i Lim hoe:
Mbola matahotra ny lova navelan'i Tiananmen ny antoko ary tena niezaka tokoa mba hametra ny fitantarana amin'ny fomba rehetra… Heveriko fa mahaliana izany satria tsy maneho fotsiny ny fiezahan'izy ireo hifehy ny fifanakalozan-dresaka momba ny 4 Jona ao Shina izany fa koa miezaka izy ireo mba hifehy ny fomba fampisehoana sy fampahatsiahivana izany ivelan'i Shina.
Namarana ny volana maro nisian'ny fihetsiketsehana notarihan'ny mpianatra tany Shina ny vono olona nanomboka tamin'ny 4 Jona 1989 raha naparitaka mba hanao famoretana amin'ireo mpanao fihetsiketsehana tany Beijing ny miaramila. Nanombantombana ny Vokovoko Mena Shinoa fa sivily 2.700 no maty, saingy nilaza tarehimarika ambonin'izany kosa ny loharanom-baovao hafa. Nitatitra ny antontan-taratasy tsiambaratelon'ny governemanta Amerikana (navoaka tamin'ny taona 2014) fa notombanana ho 10.454 raha kely indrindra ny Shinoa maty.
Nanoritsoritra ny sivana ataon'i Beijing amin'ny vono olona ho toy ny “fahombiazana ara-politika” ny fanehoan-kevitra vao haingana tao amin'ny Global Times noho izy nahomby tamin'ny familiana ilay tranga ho “zava-nitranga ara-tantara efa vasoka fa tsy fisavorovoroana marina”.
“Misy fiantraikany amin'ny famolavolana ny tantara ny fandrahonana”
mpampianatra ambony ao amin'ny Foiben'ny Asa Fanaovana-gazety Mandroso ao amin'ny Oniversiten'i Melbourne ankehitriny i Lim, izay nitantara momba an'i Shina amin'ny fampahalalam-baovao, tahaka ny NPR sy ny BBC. Nanoratra boky momba ny vono olona ihany koa izy, ​​ The People’s Republic of Amnesia: Tiananmen Revisited, izay nivoaka tamin'ny taona 2014.
Nilaza ireo namaly ny fanadihadian'i Lim fa matetika nakatona nandritra ny tsingerintaona ny fidirana ao amin'ny Kianjan'ny Tiananmen, raha hita indraindray fa mandroaka mivantana ireo mpanao gazety ny polisy. Amin'ny toe-javatra hafa, nilaza ireo nohadihadiana fa nankany amin'ny biraon'izy ireo ny polisy ary nilaza tamin'izy ireo mba tsy handeha any amin'ny kianjan'i Tiananmen.
Tamin'ny taona 2009, tsy navelan'ireo polisy manao fanamiana sivily mitazona elo hiteny tamin'ny fakantsarin'izy ireo ireo mpitati-baovaon'ny BBC sy CNN. Tamin'ny taona 2013, nosamborina teo afovoan'ny kianja ny mpanao gazetin'ny Sky News.
Nampiseho ny fanadihadian'i Lim fa norahonana na nosamborina ny iray tamin'ireo mpanangom-baovao dimy izay nitatitra ny tsingerintaona, ary nisy ny fitarainana napetraka ho azy ireo. Nilaza izy fa misy “fiantraikany amin'ny famolavolana ireo tantara lazaina [mpanao gazety] sy ny fomba hitantaran'izy ireo” ny fandrahonana.
Araka ny fanadihadiana, ny ahiahy lehibe rehefa mitatitra momba ny vono olona dia ny fidirana amin'ny loharanom-baovao, ​​araka ny filazan'ny maro fa norahonana na nosamborina ny loharanombaovaon'izy ireo. Tamin'ny valinteny marobe, nilaza ireo mpanao gazety fa matetika izy ireo no tsy mitatitra momba ny tsingerintaona noho ny fahasarotan'ny fitadiavana loharanom-baovao, na ny fahasarotana amin'ny fiarovana ny loharanom-baovao azon'izy ireo.
Nilaza ihany koa i Lim fa ny olana dia tantara maro nitarika ny 4 Jona no efa tsy tsaroana intsony, toy ny fito herinandron'ny fihetsiketsehana talohan'ny vonomoka sy ny “Oniversiten'ny Demaokrasia” teny amin'ny kianja. Hoy izy:
Rehefa mametra ny karazana fitantarana toy izany ianao, dia milaza tantara iray fotsiny – vao mainka manamafy ny hafatry ny governemanta Shinoa izany fa mampidi-doza ny fikatrohana ara-politika.
Ny tetikadin'ny ankamaroan'ny mpanao gazety, hoy i Lim, dia manomboka amin'ny fanoratana ny tantaran'ny tsingerintaona hatrany amin'ny ny enim-bolana mba hisorohana ny maro amin'ireo olana ireo.
“Nahatsapa izy ireo fa tsy nisy fiantraikany ny asan'izy ireo”
Nanadihady ireo mpanao gazety vahiny any Shina ihany koa i Lim raha nahatsapa izy ireo fa nisy fiantraikany ny tatitra nataon'izy ireo. Nanohina an'i Lim ny valinteny: Arakaraka ny nijanon'izy ireo tany Shina, no vao mainka kely ny fiantraikan'ny asan'izy ireo.
Nandany teo amin'ny 13 taona teo tamin'ny fitateram-baovao tany Shina ireo nohadihadiana. Nilaza ireo mpanao gazety sasantsasany, izay maro no efa nahazo loka fa tsy nisy tatitra vaovao nivoaka avy any Shina. Nilaza i Lim fa mety misy ifandraisany amin'ny olana atrehin'izy ireo amin'ny tatitra isan-andro ny fivatambatanan'izy ireo. “Lasa ara-dalàna ny famoretana”, hoy izy.
Ny ampahatelon'ireo namaly dia nilaza fa tsy nanao tatitra momba ny fampitahorana azy ireo izy ireo, satria tsapan'izy ireo fa ara-dalàna any Shina izany. Saingy raha nitatitra momba ny olana atrehin'izy ireo manokana ireo mpanao gazety dia miankina amin'ny fitaovana ampiasain'izy ireo izany. Ho an'ny mpanao gazety amin'ny fahitalavitra, ilay famoretana no (efa) tantara; ireo mpanao gazety an-taratasy kosa miezaka mitady fomba hitaterana ny tantara; tsy navela hiresaka momba ny zavatra niainan'izy ireo kosa ireo mpanao gazety eny amin'ny sampan-draharaha antserasera.
Nilaza i Lim fa mety tsy maintsy manova ny fenitr'izy ireo amin'ny fitateram-baovao any amin'ny firenena mpanao didy jadona ny mpanao gazety. Mpanao gazety maro no matahotra ny fandrahonana tsy mitsaha-mitombo amin'ny “visa” an'izy ireo raha toa izy ireo ka mitatitra momba ny zavatra tsy avelan'ny polisy ataon'izy ireo:
Mahagaga ahy hoe firy ny olona nilaza hoe ‘tsy te hiditra amin'ny tantara ny tenako. Tsara ho an'ny mpanao gazety ao Shina ny manao ezaka fanampiny mba hitanisana ireo karazana fanamby sy fameperana atrehin'izy ireo rehefa mitatitra tantara izy ireo.
Ilaina ny hahafantaran'ny mpamaky ny fomba nanamboarana ny tantara sy namolavolan'ny hery ivelany azy, hoy i Lim. Ohatra iray ny nanovan'ny mpanao gazety vahiny ny fenitra arahin'izy ireo amin'ny fitantanana ny faritra Xinjiang. Hoy izy,
Ny valin'ny fanadihadiana ataoko dia manipika mazava ny maha-zava-dehibe ny mangarahara – mba hanampy ny mpihaino hahatakatra ny fomba namolavolana sy nanaovana ny tatitra ary koa ho toy ny asa fanaovan-gazety ataon'ireo mpanao gazety tenany mba hialàna amin'ny fandrahonana sy ny famoretana.
Raha mitatitra ireo zavatra ireo ny olona, dia mihena ny mety hisian'ny famaizana.